वर्डप्रेस प्लगइन रेटिंग्स र समीक्षाको साथ केहि गन्ध आउँछ Martech Zone
खुला स्रोत आन्दोलनमा योगदान गजबको हुन सक्छ, तर यो हप्ता ती समयहरू मध्ये एक थिएन। हामी एक दशकको लागि WordPress समुदायमा योगदान गर्दै छौं। हामीले अनगिन्ती प्लगइनहरू बनायौं। केहि सेवानिवृत्त भएका छन्, र अरुसँग अविश्वसनीय एक्सपोजर छ। हाम्रो छवि रोटेटर विजेट प्लगइन, उदाहरण को लागी, १२०,००० पटक डाउनलोड गरीएको छ र १०,००० भन्दा बढि WordPress साइटहरुमा सक्रिय छ।
एउटा प्लगइन जुन हामीले सयौं घण्टामा लगानी गर्छौं सर्कप्रेस, ईमेल न्यूजलेटर प्लगइन हामीले वर्डप्रेसको लागि विकसित गरेका छौं। प्लगइन एकदम सरल छ, एजेन्सीहरूले ई-मेल निर्माण गर्न अनुमति दिन्छन् जसरी उनीहरूले एक थिम पृष्ठको रूपमा… तर हाम्रो सेवा मार्फत ईमेल पठाउँदै हामी क्लिक ट्र्याकि,, बाउन्स प्रबन्धन, ग्राहकहरू, र सदस्यताहरू प्रबन्ध गर्न सक्दछौं। यो जानको लागि पूर्वाधारको कामको एक थोडा लगिएको छ, तर हामी यसमा लामो यात्राको लागि छौं। हामी विश्वास गर्छौं कि वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरूसँग नेटिभ ईमेल प्लेटफर्म हुनुपर्दछ जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ।
जब हामी प्लेटफर्मको र्‍याम्पिंग गर्दैछौं, हामीले एकल व्यक्तिलाई यसको प्रयोगको लागी शुल्क लगाएनौं - यदि तपाईंले मलाई सोध्नुभयो भने उत्तम छ। रेजिष्ट्रेसनले नि: शुल्क संस्करण प्रदान गर्दछ यदि तपाईं प्रति महिना १०० भन्दा कम ईमेल पठाउनुहुन्छ, तर हामीले विस्तार गरिसकेका छौं जब हामी बिलि system प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दछौं। WooCommerce र प्रयोगकर्ताहरूका लागि सजिलो बनाउनको लागि प्लेटफर्मको सेटअपमा काम गर्नुहोस्।
मेरो आश्चर्यको कुरा, प्लगइन साइटमा हामीसँग १-स्टार समीक्षा पपअप थियो। मैले के गलत थियो भनेर तुरुन्तै हावामा हाले:
त्यसोभए ... यस प्रयोगकर्ताले वास्तवमा साईन अप कहिले गरेन तर भने जुन हाम्रो रजिष्ट्रेसन प्रक्रियामा शंका थियो। हामी पछि हामी पछि लागेका थियौं वास्तवमा क्रेडिट कार्ड जानकारी अनुरोध नगर्नुहोस्। उसले भेट्टाए कि उसले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको भए, तर ऊ सफल भएन।
मैले सोचेँ कि यो अनुचितको पक्षमा ल्याउनु पर्याप्त अन्यायपूर्ण थियो Automattic, तिनीहरूको प्लगइन समर्थन व्यक्ति लेख्दै:
मैले प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया समीक्षा भन्दा धेरै चौंकाउने थियो। म अटोम्याटिकमा भन्ने व्यक्तिसँग अगाडि र पछाडि गएँ जुन हाम्रो साइटले देखा परेन छायादार किनभने कुनै मूल्य निर्धारण सार्वजनिक रूपमा सूचीबद्ध गरिएको थिएन। छायादार?
मैले उनलाई सम्झाउँछु कि हामी कुनै पनि क्रेडिट कार्डको लागि नसोध्नुहोस् व्यक्तिलाई मूल्य निर्धारण गर्नु अघि जानकारी। र त्यसबेला पनि हामीले वास्तवमै हाम्रो प्रारम्भिक अपरेटरहरूलाई चार्ज गर्देनौं। के तपाईले कहिल्यै त्यस्तो सेवाका लागि दर्ता गर्नुभयो जुन मूल्य तिर्दैन मलाई पक्का यकिन छ कि तपाईंसँग छ… WordPress थप सेवाहरूमा कुनै मूल्य निर्धारण जानकारी बिना दर्ता अनुरोध गर्दछ। छायादार?
भनेर उल्लेख छैन मूल्य निर्धारण पृष्ठ प्रायः सोधिने प्रश्नहरूमा उल्लेख गरिएको थियो हाम्रो प्लगइन को। यस बीचमा मैले यो प्रकाशित गरें मूल्य निर्धारण पृष्ठ हाम्रो मेनूमा ताकि कोहीले पनि कुनै गडबड देखा नपरोस्, तर पनि समीक्षा हटाउन अनुरोध गरियो। प्रतिक्रिया:
त्यसोभए, अर्को शब्दमा, कसैलाई स्वीकार्नुहोस् वास्तव मा हाम्रो सेवा प्रयोग कहिल्यै १-स्टार समीक्षाको साथ हाम्रो सेवालाई दर्जा दिन अनुमति छ। जब हामी खुला स्रोत समुदायलाई मद्दत गर्ने काम गर्दैछौं र अधिक किफायती समाधान प्रदान गर्न, म पक्का छैन कि यसले कसैलाई कसरी मद्दत गर्दछ। यो मूलतया एक फोनि समीक्षा हो - लेखक पूर्ण रूप मा स्वीकार गर्दछ कहिल्यै साइन अप नगर्ने वा हाम्रो सेवा प्रयोग गर्‍यो।
मैले समीक्षा गरें कि समीक्षाकर्ताले मलाई प्लगइनको क्षमतामा दर्ता गरेको र मूल्या rated्कन गरेको हुन्थ्यो - साथै यो पनि थपे कि उसले मूल्य निर्धारण साइटमा भएको भए राम्रो हुने थियो। तर केहि चीजको लागि १-तारा पूर्वावलोकन अक्षम छ।
अद्यावधिक ११/२: अब म छु रिस उठ्योएक हटहेड, अनुचितएक झटका, पागल, र तर्कहीन किनभने म दु: खी छु कि जसले कहिल्यै प्लगइन प्रयोग नगरेको कसैले १-तारे समीक्षा दिए, हाम्रो सेवा बेइमान हो भनेर बाहिर निस्किन्छ, र जो कोही पनि दर्ता छन् मूर्ख। सेवा तिनीहरू साइन इन कहिल्यै।
मेरो ईमेल तल थियो, तिनीहरूको प्रतिक्रिया शीर्ष छ।
हुनसक्छ यो समय आयो जुन मैले केवल अन्य प्लगइन विकासकर्ताहरूले गरिरहेको छु मत्ती र वर्डप्रेसको टोलीले कदर गर्दैन, र कुनै पनि समय र प्रयास दान गरेर बाइपासमा फिर्ता पठाउँदछ र आफ्नै साइटमा प्लगइनहरू बेच्न शुरू गर्दछ। यो स्पष्ट छ कि उनीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्म समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूको वास्ता छैन।
अद्यावधिक ११/२: आज, WordPress मा स्वयंसेवक टोलीले मलाई मार्केटिंगमा शिक्षा चाहिएको छ र मलाई राम्रो मान्छे हुन सल्लाह दिएको छ। मेरो ईमेल तल थियो, तिनीहरूको प्रतिक्रिया शीर्ष छ।
टैग: माइक एपस्टेनWordPress प्लगइन रेटिंग्सवर्डप्रेस प्लगइनहरूवर्डप्रेस रेटिंग्स समीक्षा
म तपाईसँग सहमत छु र समीक्षा प्रणाली ट्रिप सल्लाहकार जस्तै गइरहेको छ। त्यहाँ समीक्षा प्रणालीको बारेमा कुनै गुणस्तर आश्वासन नीति छैन तर समीक्षाहरू बिक्री बिन्दुको रूपमा प्रयोग गरिन्छ उत्पादनहरू/सेवाहरूको लागि पनि जुन तिनीहरूले भनेजस्तो काम गर्दैनन् वा लाइसेन्स नीति तोड्छन्। यो अनुचित र व्यावसायिक छैन। त्यहाँ धेरै बाह्य समीक्षा/मूल्याङ्कन प्रणालीहरू पनि छन् तर तपाईं कम मूल्याङ्कन अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
म मूल्याङ्कन/समीक्षाहरूमा विश्वास गर्दिन किनभने तिनीहरू स्वतन्त्र तेस्रो पक्षद्वारा व्यवस्थित छैनन् र तिनीहरूसँग कुनै प्रणाली प्रमाणपत्रहरू छैनन् (जस्तै iso वा समान)।
म पनि envato वा समान जस्तै बजार मा धेरै विश्वास गर्दिन। विगतमा मैले केही ट्र्याकहरू पेश गरें (म पनि एक संगीतकार हुँ) र तिनीहरू कहिल्यै स्वीकार भएनन्। अहिले म केही चलचित्र कम्पनीका लागि संगीत लेखिरहेको छु ।
त्यहाँ केहि प्रणालीहरू छन् जुन वास्तवमा मध्यस्थताको राम्रो काम गर्दछ। एन्जीको सूची, उदाहरणका लागि, ठेकेदारलाई चीजहरू सही बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ र जब यो पारस्परिक रूपमा सन्तोषजनक रूपमा सहमत हुन्छ, खराब समीक्षा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि यो समीक्षा खडा छ - यसले समुदायलाई कुनै मूल्य प्रदान गर्दैन र हाम्रो प्लगइनको ग्रहणलाई मात्र चोट पुर्याउन सक्छ।
अँध्यारो तर्फ आउनुहोस् र व्यावसायिक CMS को शक्ति अँगाल्नुहोस्, डग! 🙂
कष्टप्रद व्यक्तिहरू खुला स्रोत समुदायमा मात्र होइनन्।